ကတ်ထူပြားများကိုပြန်လည်အသုံးပြုရန် IDE3- ခရစ္စမတ်အထူး လက်မှုပညာ
အိုင်ရင်းဂျီ | | ကတ်ထူပြားလက်မှုပညာ, ခရစ်စမတ်လက်မှုပညာ, ပြန်လည်
ဤသည်၌ သင်ခန်းစာ ငါမင်းကိုသင်ပေးမယ် အကြံဥာဏ် ၁၀ မျိုး ဒါကြောင့်သင်ကပြန်သုံးနိုင်ပါတယ် ကတ်ထူပြားပြွန် အိမ်သုံးစက္ကူ၊ မီးဖိုချောင်သုံးစက္ကူ၊ ပလတ်စတစ်ခြုံများ၊ ကော်တိပ်များနှင့်လှပသောအလှဆင်ပစ္စည်းများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲလိုက်သည် Navidad.
သငျသညျဘုံဒြပ်စင်အဖြစ်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်လက်မှုပညာသုံးခုလုပ်ဖို့ ကတ်ထူပြားပြွန်, ဒါပေမယ့်ငါတို့လည်းအခြားကိုသုံးပါလိမ့်မယ် ပစ္စည်းများ တစ်ခုချင်းစီကိုစိတ်ကူးမှတိကျတဲ့။
ဆီးနှင်း၊ mistletoe, acorn, miniature pinecones များကဲ့သို့ခရစ်စမတ်အလှဆင်ပစ္စည်းများ ...
အဖြူ၊ အနီ၊ အနက်ရောင်နှင့်ရွှေ acrylic ဆေးသုတ်
အနီရောင် Eva ရော်ဘာသို့မဟုတ်အနီရောင်ကတ်ထူပြား
လာမယ့်၌ ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ မင်းကြည့်လို့ရတယ် ပီပီပြင်ပြင်ဖြစ်စဉ် အဆိုပါပြန်လည်အားဖြင့်စိတ်ကူးများတစ်ခုချင်းစီ၏ ကတ်ထူပြားပြွန်။ သူတို့အရမ်းပဲ လွယ်တယ် နှင့်အလွန်ကောင်းသောရလဒ်များကိုနှင့်အတူ။ ထို့အပြင်လုပ်ရန်လျင်မြန်စွာ၊ နောက်ဆုံးသောအချိန်၌သင်သည်အဆင်တန်ဆာအချို့ကိုဝယ်ယူရန်သို့မဟုတ်ဖန်တီးရန်အလွန်မျှတမှုရှိပါကဤအတွေးအခေါ်များကိုသင်သုံးနိုင်သည်။ စီးပွားရေး.
အလှဆင်ပစ္စည်းများကိုသင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်ရန်မည်သည့်အဆင့်ကိုမဆိုမမေ့ပါနှင့်။ ဒီအတွက်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုရိုးရှင်းတဲ့နည်းနဲ့ရှင်းပြပါမယ် လက်မှုသုံးမျိုး ဒါကြောင့်မင်းမှာပြproblemနာမရှိဘူး။
လက်သုတ်ပဝါကွင်းများပြုလုပ်ရန်သင်ကဒ်ထူပြားများမှကတ်ထူပြားတစ်ချောင်းကိုဖြတ်ရမည် တစ်ဝက်အဲဒီကနေသင်ရနိုင်တယ် လက်သုတ်ပုဝါကွင်း။ paste လုပ်ပါ cinta ကတ်ထူပြားပေါ်မှာနှင့်ကအားလုံးကိုဝိုင်းရံ။ သင်ပြွန်ဖုံးပြီးတာနဲ့တစ် ဦး ချည် လာဇို အခြားဖဲကြိုးသို့မဟုတ်ကြိုးတစ်ချောင်းဖြင့်၎င်းကိုထူးခြားစေရန်။ ကွင်းဆက်၏အလယ်တွင်သင်ကပ်နိုင်သည် အဆင်တန်ဆာ သင်ရွေးချယ်သော ငါတစျခုအတှကျရှေးခယျြခဲ့ Acorn နှင့်အခြားတ ဦး တည်းအဘို့ သစ်သားဆီးနှင်း.
ဒီအဆင်တန်ဆာ၏ဂုဏ်အသရေက၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပေးရန်ဖြစ်ပါသည် Frost, နှင့်ကျနော်တို့နှင့်အတူအောင်မြင်ရန်သွားကြသည် အဖြူရောင်အလင်းရောင်။ ပထမ ဦး စွာသင်ကတ်ထူပြားကိုဖြတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် ၈ ချောင်း ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် အကျယ် 1cm။ ကတ်ထူစက်ဝိုင်း၏အစွန်းနှစ်ဖက်ကိုအနည်းငယ်ညှစ်။ သင်နှင့်ပုံသဏ္aာန်တူအောင်ပြုလုပ်ပါ အရွက်။ တ ဦး တည်းအဆုံးမှာကော်4နှင့်တစ် ဦး ဖွဲ့စည်းရန် Cruz။ သင်ကျန်ရှိနေသေးသောကျန်ရှိသောအရာများသည်ယခင်တစ်ခု၏တစ်ခုချင်းစီအကြားတွင်ရှိသည်။
အခြားသူများကိုဖြတ်တောက်ပါ လေးစက်ဝိုင်း ဒါပေမယ့်ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့သူတို့ကိုဖွင့်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်လုပ်ရမယ့်အရာကသူတို့ကိုဖန်တီးရန်ခရုတစ်ခုလိုလှိမ့်ထားလို့ပဲ လိမ်။ ထိုလိမ်သည်သင်လျှက်နေသောပထမစက်ဝိုင်းများအတွင်းလျှက်ထားသင့်သည်။
အဲဒါနှင့်အတူကဆေးထိုးခြင်း ရေမှုံပက်ပိုလွယ်ကူတဲ့ဖြီးနှင့်အတူ။ ငါသုံးပြီး ဒိုရာဒို ဒါပေမယ့်လည်းအတွက်အလွန်ကောင်းသောကြည့်ရှုသည် အဖြူ။ ဆေးသုတ်အခြောက်လှန်းသောအခါများများလျှောက်ထားပါ အဖြူရောင်ကော် မျက်နှာများ၏တ ဦး တည်းအားဖြင့်၎င်း, ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည် တောက်ပ။ ခြောက်သွားရင်အဖြူရောင်တောက်ပနေတဲ့အတွက်အဆင်တန်ဆာရှိတယ်ဆိုတာပေါ်လာလိမ့်မယ် Frost အားလုံးမျက်နှာကိုကျော်။
La ကာတီ ၎င်းသည်အရှည်လျားဆုံးဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်အလွန်ကြာမြင့်သည် လွယ်ကူသော.
ပန်းချီ ကတ်ထူပြားပြွန် အရောင်၏ နီသော။ ဖြတ်ယူပါ အဝိုင်း ရော်ဘာသို့မဟုတ်အနီရောင်ကတ်ထူပြားနှင့်နယ်နိမိတ်တစ်ခုလုံးနှင့်လိုင်းအချို့ကို၎င်းကဲ့သို့ပြုလုပ်ပါ သစ်သားတံခါး။ ပြွန်မှစက်ဝိုင်းကပ်ပါ။ လုပ်ဖို့ ခေါင်မိုး ကတ်ထူပြားစတုဂံတစ်ခုကိုဖြတ်ပြီးဆေးထိုးပါ အဖြူ။ အဆိုပါဟောင်းနွမ်းအကျိုးသက်ရောက်မှုစေရန်ကထိပေးပါ အနက်ရောင် ခြောက်သွေ့သောစုတ်တံဖြင့်အလွန်ညင်ညင်သာသာဖြင့်၊ သင်ပိုမိုမှုန်ဝါးလိုလျှင်တစ်သျှူးသို့မဟုတ်စက္ကူဖြင့်အနည်းငယ်ပွတ်ပေးပါ။ အနီရောင်ပြွန်ကျော်ခေါင်မိုးကော်။
အိမ်ခေါင်မိုးနှင့်အိမ်ကြားအပေါက်ကိုဖုံးရန်အချို့ကိုကော်ပါ အရွက်နှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထည့်ရန်အချို့လျှောက်ထားပါ ဆီလီကွန်စက်ဝိုင်း အလယ်ဗဟိုထဲမှာကဆေးထိုးခြင်း ဒိုရာဒို။ ၎င်းတွင် paste လုပ်ပါ ဘောလုံးနီ သို့မဟုတ် ကွမ်းခြံကုန်း.
လျှောက်ထားပါ အဖြူရောင်ဆေးသုတ် အဆိုပါတူအောင်ဖန်တီးရန်အိမ်၏အခြေစိုက်စခန်းမှာ nieve။ ပြီးတော့ခေါင်မိုးထဲမှာအပေါက်တစ်ပေါက်လုပ်ပြီးကြိုးတစ်ချောင်းကိုဖြတ်လိုက်ရင်မင်းကနေဆွဲထားနိုင်တယ် ခရစ်စမတ်သစ်ပင်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - လက်မှုပညာ » လက်မှုပညာ » ပြန်လည် » ကတ်ထူပြွန်များကိုပြန်လည် အသုံးပြု၍ ခရစ္စမတ်အလှဆင်ခြင်းအတွက်အကြံဥာဏ် ၃
သင့်ကိုယ်ပိုင်အိမ်လုပ် kledledrum ကိုရွှံ့အိုးဖြင့်ပြုလုပ်ပါ